WWE News: nifamofoana i Bayley - Wwe
WWE News: nifamofoana i Bayley
Raha ny Tompondakan'ny NXT teo aloha Pamela Rose Martinez, fantatry ny WWE Universe ho Bayley, dia tsy nihetsika nandritra ity fanontana Raw ity, afa-tsy ny horonan-tsary Fallout taorian'ny hetsika lehibe nataon'ny vehivavy niaraka tamin'i Sasha Banks; nanana ny antony nankalazany izy.
Na dia mbola tsy nambara tamin'ny fomba ofisialy aza izany dia nanamafy ny anatiny fa nifamofoana tamin'ny sipany efa ela- i Aaron Solow. Hatramin'izao, mbola tsy nisy daty fampakaram-bady nambara.
Bayley sy Solow dia mpivady, amin'ny alàlan'ny matevina sy mahia, nandritra ny taona maro izao. Nihaona tamin'ny sehatry ny fahaleovan-tena izy ireo hatramin'ny taona 2010. Mpikomy matihanina ny tenany, i Solow dia nitolona tamin'ny fampiroboroboana tsy miankina isan-karazany nandritra ny taona maro ary mbola manohy manao izany amin'ny naha-freelancer azy.
Amin'ny maha mpikambana ao amin'ny ekipa tag Flying Solow azy dia tompon-daka tamin'ny ekipa tag tag an'ny ACW, izay fantatra amin'ny anarana hoe Anarchy Championship Wrestling (miaraka amin'i Jason Cade) i Aaron. Na eo aza ny zava-bitany, dia miharihary fa tsy nalaza noho ny antsasany tsara kokoa izy. Izy koa dia mitolona amin'ny lalao gimmick- Stuart Cumberland.
Ny fanambaràn'i Bayley dia manaraka ny sakaizany efa ela, sy ny mpanohitra azy taloha, Sasha Banks, izay nanambady ny mpanamboatra akanjo WWE, Kid Mikaze, fantatra ihany koa amin'ny hoe Sarath Ton, tamin'ny fiandohan'ny 2016. Raha tsy nisy fiantraikany tamin'ny fandaharam-potoanan'i Banks ilay fampakaram-bady, izahay manontany tena raha toa ka terena haka fotoana tsy lavitra ny andro fampakaram-bady i Bayley.
Manoloana indrindra ny fiheverana azy dia ho anisan'ny sarin'ny Tompondakan'ny Vehivavy Raw, handroso tsy ho ela.
Talohan'ny nanasoniavany an'i NXT dia talenta indie mavitrika i Bayley
Raha i Bayley dia iray amin'ireo kintana mafana indrindra an'i NXT, dia tsy talenta an-trano tanteraka izy. Nalaza be tamin'ny fizaran-tany mahaleo tena izy, talohan'ny nahatongavany tany WWE tamin'ny taona 2013. Mpankafy Big Time Wrestling izy, fampiroboroboana indie hatramin'ny faha-11 taonany. Nanomboka nitolona tamin'ity fampiroboroboana ity izy, tamin'ny anarana hoe Davina Rose.
Nandritra io fihazakazahana indie io no nihaonany voalohany tamin'i Solow, ary dia nipaoka azy roa izy ireo!
Izahay ao amin'ny Team Sportskeeda dia mirehareha be amin'ilay azo ambenana ary maniry azy sy ny vadiny, fiainana sambatra tokoa. Enga anie ianao hanana taona sambatra miaraka!
Raha mila vaovao farany amin'ny WWE News, fandrakofana mivantana sy tsaho mitsidika ny faritra Sportskeeda WWE. Raha manatrika hetsika WWE Live ianao na manana tendron'ny vaovao ho anay dia mandefa mailaka aminay ady an-trano (amin'ny) sportskeeda (teboka) com.
ny fomba hahatonga ny olona hahatsapa fa tadiavina
zavatra mahatsikaiky holazaina amin'ny mpahay zava-mahadomelina
maninona aho no mandratra ireo tiako
ahoana no hilazana raha misy bandy te-hiara-matory aminao fotsiny
ny fomba hafa foana ny vehivavy hiala ny vadinao